ဘယ်လိုလျှပ်စစ် Scooter စီးထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကော? - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
အခုတော့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် အားလပ်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစီးနင်းအဆိုပါလူငယ်များ လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter , လက်ကျန်ငွေနှင့်တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်ကိုကငျြ့သုံးနိုငျသညျ, နှင့် cerebellum ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရန်နိုငျသညျ, ထို cardiopulmonary စောင်ရေတိုးမွှငျ့။ စီး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာဘုတ်အဖွဲ့ , သငျသညျ, ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်းထန်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ပြည်နယ်ထဲမှာတည်သည်အသီးအသီးစိတျအပိုငျးကြွက်သား၏ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်ခြုံငုံချိန်ခွင်လျှာ, သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းမွေးမြူဖို့, အများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထောက်လှမ်းရေးမြှင့်တင်ရန်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီ Scooter လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း "ပဟေဠိဂိမ်း" အဖြစ်လူသိများသည်ကတက်ကြွစွာယုံကြည်မှု, လွတ်လပ်သော, ခိုင်မာတဲ့, ရန်လိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလူငယ်များပွုစုပြိုးထောနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားလည်းမိသားစုများ၏ထောက်ခံမှုရတဲ့သော့ချက်ကို၎င်း, သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ဘေးကင်းမှုဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကို balancing Scooter သင်ဤသည်၎င်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆုံးဖြတ်သည်ကြောင့်, ul 2272 လက်မှတ်သို့မဟုတ်မလွန်ရှိမရှိဝယ်ယူခဲ့သည်။
1. အဆိုပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိ hoverboard ခြေထောက်ကြွက်သားတွေ recover နှင့်သိသိသာသာတိုးတက်လာဖို့ကခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အင်အားသုံးပြီးလှုပ်ရှားမှု, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ခြေလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏အပေါများဆုံးရမှတ်ဖြစ်ပြီး, အောက်ခြေ ပွတ်တိုက်ထဲမှာခြေပန်းကန်အဆိုပါလှုံ့ဆော်ဆက်လက် ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာ စီး, acupoint ဆွရကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင့်ချိန်ခွင်လျှာရန်, တင်းမာနေခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စီးနင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 2. သည်, ပခုံး, ခါး, ခြေထောက်, လက်ကောက်ဝတ်, ကျောရိုးနှင့်အခြားအဆစ်စနစ်ဖြစ်ပြီးပြီစေနိုင်သည်။ ထိထိရောက်ရောက်ခြေထောက် function ကိုခိုင်မာစေရန်, နှင့်၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။
3. Long ကသက်တမ်းစီးခြင်း, ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုနိုင်စွမ်း၏ချိန်ခွင်လျှာမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်သိသိသာသာအိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေး, လုံ့လရှိသူ, နုပျိုတက်ကြွအပြည့်အဝ, Anti-အိုမင်းတိုးတက်စေနိုင်သည်, ထိရောက်စွာအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၏ဖြစ်ပျက်မှုတားဆီး။
4. လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းထိရောက်စွာအဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
5. လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာကားတစ်စီးလှုပျရှားမှု, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးသောပုံစံများထုတ်သယ်ဆောင်ရန်, အသက်ရှင်ခြင်းများ၏ content ကြွယ်ဝစေ, ပပျောက်ခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့အလေ့အထကိုလျှော့ချတစ်ဦးအသုံးဝင်သောအားကစား, ဒါမှမဟုတ်ကြော့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။